China Ngocingo Oluhlabayo Ukwenza Machine Ukwakha futhi Factory | UJiake
Isibonelo No.: CS-A, CS-B, CS-C
Umshini wocingo oluhlabayo weJiake Machinery unikeza isisombululo esihle kakhulu sokwenza ucingo oluhlabayo.
Izinsimbi zethu ezihlabayo nezinsimbi imishini yocingo oluhlabayo kulula ukuyisebenzisa, ingakhuphula kakhulu ukusebenza kahle kokukhiqiza, futhi ifanele ukukhiqizwa kwezitayela ezahlukahlukene zezintambo zocingo zokuphepha.
Izinhlobo ezintathu: evamile ezisontekile, umucu olulodwa, twist reverse ezimbili
Impahla eluhlaza: wire lashukumisa, PVC camera wire, njll
Isisebenzi esisodwa singasebenzisa imishini eminingi:
Ihora elilodwa lingakhiqiza cishe i-70KG / 40KG / 50KG:
Ngocingo Oluhlabayo Ukwenza Machine ikhiqiza ngocingo oluhlabayo. Ucingo oluhlabayo lusetshenziselwa ukuvikela, ebaleni lokudlala, ukondla imfuyo noma umngcele wezwe, kwezokuvikela izwe, ezolimo, ukufuywa kwezilwane, indlela yezimoto, njll. Sihlala sigcina ubuchwepheshe obuhle bokuklama nobuchwepheshe bokukhiqiza kulo mshini wocingo oluhlabayo iminyaka eminingi.
Sakha amamodeli amathathu ocingo oluhlabayo umshini wocingo: I-CS-A ingumshini ojwayelekile osontekile wocingo oluhlabayo; I-CS-C iwumshini ophindayo ophindwe kabili wocingo oluhlabayo; I-CS-B iwumshini owodwa wokwenza ucingo oluhlabayo.
Imodeli CS-A CS-B CS-C
Ngocingo oluhlabayo ububanzi 1.6-2.8mm 1.6-2.8mm 1.6-2.2mm
Isikhala esibi 3 ”, 4”, 5 ” 4 ”, 5” 4 ”, 5”
Inombolo esontekile 3-5 7
Isithuthuthu 2.2kw 2.2kw 2.2kw
Impahla eluhlaza Wire lashukumisa noma PVC camera camera. Ucingo oluhlanganisiwe Ucingo oluhlanganisiwe
Ukukhiqizwa 70kg / h, 25m / min 40kg / h, 18m / iminithi 50kg / h, 18m / iminithi
Ingqikithi yesisindo 1050KG I-1000KG 1050KG
Usayizi wokupakisha 5.9CBM 5.8CBM 5.9CBM
Ngesandla ukufakwa, Kulula ukusetha;
Ikhava yensimbi kushaft yokushayela yokusebenza kokuphepha;
Izinto zokonga namandla aphezulu;
Counter ukubala inani barbs futhi abale ubude ngocingo oluhlabayo.
Inkinobho Ishintsha futhi leveler ukuqala futhi umise umshini kalula.
Isikhiphi esheshayo nesilula esivela emshinini.
Isistimu eqondisayo yokugwema izintambo zocingo.
Ucingo oluhlabayo lusetshenziselwa ukuvikela, ocingweni lokudlala, ukondla imfuyo noma umgibeli kazwelonke, kwezokuvikela izwe, ezolimo, ukufuya izilwane, indlela yezokuxhumana, njll.
Okuzenzakalelayo Ngocingo Oluhlabayo Ukwenza Machine
Ngocingo Oluhlabayo Machine
Ngocingo Oluhlabayo Ukukhiqiza Machine
Ngocingo Oluhlabayo razor Machine
Ngocingo Oluhlabayo razor Wire Machine
Okuzenzakalelayo ngokugcwele Ngocingo Oluhlabayo Machine